Jamie Carragher Oo Liverpool U Soo Jeediyay In Ay La Soo Saxiixdaan Xidig Astaamaha Sadio Mane Leh Iyo Jamaahiirta Reds Oo Hal Xidig Isku Raacay. – GOOL24.NET
Jamie Carragher Oo Liverpool U Soo Jeediyay In Ay La Soo Saxiixdaan Xidig Astaamaha Sadio Mane Leh Iyo Jamaahiirta Reds Oo Hal Xidig Isku Raacay.
Halyaygii hore ee kooxda Liverpool iyo xulka qaranka England ee Jamie Carragher ayaa maamulka Reds u soo jeediyay in ay suuqa kala soo saxiixdaan xidig astaamaha Sadio Mane oo kale leh, laakiin waxaa cajiib noqotay in falcelintii jamaahiirta Reds ay noqotay in hal xidig oo Premier league ka ciyaara ay ku saleeyeen astaamaha uu Jamie Carragher sheegay.
Jamie Carragher ayaa ku dooday in Liverpool ay u baahan tahay xidig muhiim ah oo buuxin kara boosaska Sadio Mane, Mohamed Salah ama Roberto Firmino haddii ay dhaawacmaan ama nasiino la siiyo inta uu xili ciyaareedku socodo, wuxuuna Carragher sheegay in halkii ciyaartoy tayo sare leh oo hal boos ka ciyaara in astaamaha Sadio Mane lagu raadiyo saxiixa cusub ee la doonayo.
Jamie Carragher ayaa Sadio Mane ku amaanay in uu yahay xidig tayo u leh in uu ka ciyaaro garabka weerarka midig, weerarka dhexe, garabka weerarka bidix iyo waliba caawiyaha weerarka taas oo xidiga ree Senegal ka dhigtay mid gabi ahaanba ka duwan xidigaha kale ee Reds.
Jamaahiirta Liverpool ayaa barta twitterka ugu jawaabay Jamie Carragher waxayna u sheegeen in astaamaha uu sheegay uu leeyahay xidiga kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha kaas oo ay sidoo kale doonayaan kooxo waa wayn oo Premier league ahi.
Jamie Carragher oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Anagu uma baahnin gool dhaliye, waxaanu u baahanahay ciyaartoy shaqo badane ah. Mane oo kale haddii aad jeceshahay. Ugu dhawaan haddii aad doonayso waxaad Mane ka ciyaar siin kartaa afka hore, waxa uu ka ciyaari karaa bidixda, midigta ama safka hore sida qof la mid ah Alexis Sanchez”.
Jamie Carragher ayaa arkayn sabab loo raadiyo ciyaartoy badal u noqon kara Firmino oo haddii loo baahdo booskiisa buuxin kara wuxuuna yidhi: “Ma jirto sabab loo keeno gool dhaliye caawiya Firmino oo kaydka fadhiya. Waxaad u baahan tahay qof kaas oo iman kara oo buuxin kara tayada hal ama laba ciyaartoy oo kulamada ku soo bilawda marka loo baahdo oo kuwa kale la tartama”.
Jamaahiirta Reds ayaa markiiba hadalka Jamie Carragher kaga dooday baraha bulshada gaar ahaan twitterka waxayna soo bandhigeen in astaamaha uu Carragher sheegay uu leeyahay xidiga kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha kaas oo xagaagii hore Liverpool lala xidhiidhinayay balse Tottenham iyo Chelsea ay sidoo kale liiska ku jiraan.